Archive du 20180915
Kortezin’ny Praiminisitra nandona zaza Niharan’ny fitsaram-bahoaka teny Ivandry
Fiara iray an’ny polisy, marika Toyota Yaris, takelaka mena, sady misy ireny “gyrophares” ary misy soratra “police” fa tsy nisy laharana no nitera-doza teny anoloan’ny La City Ivandry omaly takariva tokony ho tamin’ny 7 ora mahery kely teo.
Fanonganam-panjakana 2009 Zioga tsy mbola afak’i Andry Rajoelina
Ampy ilazana ny zava-nitranga tany Paris - Frantsa ny alakamisy teo fa ho sahirana amin’ny fifampiresahany amin’ireo mpiara-miombon’antoka sy mpiara-miasa any ivelany i Andry Rajoelina ary tsy mbola voakosoka fa tadidin’ny olona tsara ny fanonganam-panjakana notarihiny tamin’ny 2009.
Antoko lehibe fahiny Manao mersenera sisa
Mipatitaka amin`izao fotoana ireo antoko heverina ho lehibe eto Madagasikara.
Vaomiera misahana ny fifidianana Mihetsiketsika fatratra
Taorian’ny fivoriambe voalohany notanterahan’ireo mpikambana eo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI amin’ny endriny vaovao izay
Marc Ravalomanana Hanao fampisehoan-kery goavana
Na amin’izay faritra rehetra tsidihany na any anatin’ny tambajotra facebook na amin’ny alalan’ireo tsapan-kevitra isan-karazany na eto Madagasikara na any Afrika na any Eoropa na any Etazonia dia mafy i Marc Ravalomanana.
Pasitera Mailhol Manindry ny FFKM ?
Mitady haka ny fon’ireo fiangonana zandriny ny pasitera Mailhol, iray amin’ireo kandida filoham-pirenena.
Fandrakofana fotoam-pifidianana Mila miasa an-kalalahana ny mpanao gazety
Tsy ho mora ny asa miandry ny mpanao gazety momba ny fandrakofana ny fifidianana ao anaty fahaleovantena tanteraka.
Ady amin’ny famotsiam-bola Ilaina ny fiaraha-mientan’ny rehetra
Nisy ny atrikasa niarahan’ny Sampan-draharaha miady amin’ny famotsiam-bola sy ny famatsiana asa fampihorohoroana (SAMIFIN) sy ireo mpiara-miombon’antoka tetsy amin’ny Hotely Le Louvre Antaninarenina omaly zoma 14 Septambra.
Sambo mpiady Espaniola Mandalo any Antsiranana
Noho ny fandalovan’ny sambo “Castilla” an’ny tafika an-dranomasin’i Espana dia nidina any an-toerana ny delegasiona iray notarihin’ny praiminisitra, Ntsay Christian omaly zoma 14 septambra.
COSAFA CUP VEHIVAVY
Rehefa lavon’ny vehivavy Afrikana Tatsimo 2-1 tamin’ny alarobia teo ny Barea vehivavy miatrika ny Cosafa Cup 2018 any Afrika Atsimo dia mbola resy fanindroany indray koa omaly zoma 14 septambra 2018 fa lavon’i Malawi 2-0 be izao.
Kitra -FUTSAL karakarain’ny CUA Hifandona amin’ny Polisy ny Boriboritany voalohany
Ny zoma 21 septambra ho avy izao no hotontosaina ao amin’ny kianja Mitafon’i Mahamasina ny famaranana ny lalao foot à 7 fantatra amin’ny anarana hoe FUTSAL,
Hazakazaka 15 km de Tanà Nahemotra amin’ny 24 febroary 2019
Voatery nahemotra ho amin’ny 24 febroary 2019 ilay hazakazaka 15 km novinavinain’ny SAAR “Seksion’ny Atletisma Antananarivo-Renivohitra” tarihan’ny filohany, Rtoa Rakotoson Nivo Harisoa,
Seho ivelany, seho ivelany…!!
Mihetsiketsika daholo amin’izao fotoana ireo malaza ho hery velona sangany rehetra amin’ny fifidianana efa akaiky.
Fanadinana BEPC tany Ambatondrazaka Tafakatra 90 % ny taham-pahafahana
Nivaly ny fanadinana BEPC tany amin’ny Cisco Ambatondrazaka ary nahatratra 90% ny taham-pahafahana. Somary nahavelom-panontaniana ny rehetra ny vokatra.
Fanomanana ny bakalorea –Boriboritany faha 4 Hanomboka amin’ny alatsinainy ny « Cours » maimaimpoana
Araka ny toromarika azo avy tamin’ny ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra, Ramatoa Lalao Ravalomanana,
BEPC 2018 Cisco Toamasina I Niakatra ho 40,46% ny taham-pahafahana
Nivoaka ny alakamisy teo ny valin’ny fanadinana BEPC ho an’ny Cisco Toamasina I, ka niakatra ho 40,46% ny taham-pahafahana tamin’ity taona ity, raha toa ka 38,77% izany ny taona 2017.
Notokanana omaly teny amin’ny oniversiten’Antananarivo, eny Ankatso, ny fakiolten’ny lalàna sy ny siansa politika.
Tovonanahary Rabetsitonta Olan’ny tantsaha ny tsy fananam-bola
Tsy afaka mividy masomboly sy zezika akory ny ankamaroan’ny tantsaha eto Madagasikara, hoy ny filohan’ny Antoko Politika Grad Iloafo Tovonanahary Rabetsitonta. Antony ny tsy fananan’izy ireo vola, hoy izy,
Namontana Nesorina ireo mpivarotra amoron-dalana
Noho ny toromarika avy amin’ny lefitra voalohan’ny ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra, ny kolonely Ramboasalama Emilien ary noho ny fahitana fa maloto sy mikorontana ny tsenan’i Namontana sy ny manodidina, dia nanala ireo mpivarotra amoron-dalana sy nandamina ny tsena,